မြန်မာသတင်း - Blogs - Myanmar in Singapore
All Blog Posts Tagged 'မြန်မာသတင်း' (216)
Created on Wednesday, 04 December 2013 23:29
အခုကြွရောက် ချီးမြင့်တဲ့ ပရိတ်သတ်အားလုံးကို ကျွန်တော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ EMG စတင်တည်ထောင်စဉ် ကတည်က အားပေးခဲ့ကြတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ၊ ကြော်ငြာရှင်တွေ၊ အားပေးတဲ့ သတင်း source တွေ၊ ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ ကောင်းတူဆိုးဘက် ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ၊ ကျွန်တော့်တို့ အပေါ်မှာ အမြဲတမ်း အားပေးခဲ့ကြတဲ့ မိတ်ဆွေအားလုံးကို ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဒီနေရာကနေ ကျေးဇူးတင်စကား ပြောချင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ခုနရှင်းပြခဲ့တဲ့ ဒီဂျစ်တယ်မိဒီယာ… Continue
Added by ၀တ်မှုန် on December 5, 2013 at 8:07pm —
No Comments 2013 ကမ္ဘာ့အဂတိလိုက်စားမှု အဆိုးဆုံးနိုင်ငံစာရင်းမှ မြန်မာလွတ်မြောက်စပြု
၂၀၁၃ ကမ္ဘာအဂတိလိုက်စားသောနိုင်ငံဇယား Corruption Perceptions Index 20132013 အတွက် လာဘ်စားမှုဆိုးဝါးတဲ့နိုင်ငံမြေပုံတွင် မြန်မာနိုင်ငံအညိုရောင်မဟုတ်တော့ပါ။ နိုင်ငံစာရင်းတွင် မနှစ်ကထက် အများကြီးအဆင့်တက်လာပါသည်ကို တွေ့ရသည်။ ၂၄လတာ့် အဖွဲ့အစည်းများစွာမှ တွက်ချက်မှုကြောင့် ယခု ၂နှစ်ကျော်တွင် တိုးတက်မှုကို တွေ့ရသည်။ ၁၇၇နိုင်ငံတွင် မနှစ်က အဆင့်၁၇၂ (CPI 15) မှ အဆင့်၁၅၇ (CPI 21) သို့ တက်လာသည်ကို ဝမ်းမြောက်ဖွယ်တွေ့ရသည်။ အားရဖွယ်မဟုတ်သော်လည်း… Continue
Added by ၀တ်မှုန် on December 5, 2013 at 8:05pm —
အေးနေဝင်းနဲ့ ကျော်နေဝင်း၊ အဖိုး (ဗိုလ်)နေဝင်းဆိုးမွေများ - တူးမောင်ညိုနှင့်သန်းဝင်းလှိုင်တို့ မှတ်တမ်းတင်သည်။
သမ္မတ(ဗိုလ်) ဦးသိန်းစိန်က “နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား” ထဲ စာရင်းသွင်းပြီး “လွှတ်ပေး” လိုက်သည့် အေးနေဝင်းနဲ့ ကျော်နေဝင်း တို့ပြောစကားတွေကြားရတော့ ဤသို့ကောက်ချက်ချမိသည်။
(ဗိုလ်) ဦးနေဝင်းသည် သူ၏ “ဆိုးသွမ်းမိုက်မဲမှု” အစဉ်အလာဓလေ့ကို စနစ်အရသာမက၊ သွေးသားအရပါ အမွေပေးသွားခဲ့… Continue
Added by Zarni Gyi on November 19, 2013 at 11:30am —
No Comments အဂတိ လိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေ ၂၀၁၃ - ပညာရှင်များသုံးသပ်ချက်
ရန်ကုန်မြို့၊ မဟာဗန္ဓုလ ပန်းခြံလမ်းရှိ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် အဆောက်အအုံအား တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-ကြည်နိုင်)
လက်ရှိကာလ၌ အဂတိ လိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေ အသက်ဝင်နေပြီ ဖြစ်သည့်အတွက် လက်ရှိအစိုးရ လက်ထက်တွင် အဂတိတရား လိုက်စားမှုများ ရှိပါက နောင်လာမည့် အစိုးရသစ်က… Continue
Added by Zarni Gyi on November 19, 2013 at 7:12am —
"ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ပါတီနိုင်ငံရေး ကင်းဖို့" - မြန်မာသံတော်ဆင့်
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးတို့ တပူးတွဲတွဲ ရှိနေခြင်းအပေါ် နိုဝင်ဘာလထုတ်… Continue
Added by Zarni Gyi on November 19, 2013 at 7:08am —
No Comments စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေး ဆောင်းပါများ အတွဲ၅၀၀
500. Polaris Burmese Library – Singapore – Collections - Vol 500 စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေး ဆောင်းပါများ အတွဲ၅၀၀ စာအုပ်ထွက်လာပါတယ်။ ၂၀၀၇ စင်ကာပူလမ်းပြကြယ်မြန်မာစာကြည့်တိုက်အတွက် စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာ စာအုပ်အမှတ်၅၀၀ ကို… Continue
Added by Zarni Gyi on November 18, 2013 at 7:30am —
No Comments မြန်မာနိုင်ငံမှာ လျှပ်စစ်ဈေးနှုန်းများ ရုတ်တရက်မြှင့်တင်လိုက်ခြင်းကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း
ပြသနာဒီဆုံးဖြတ်ချက်သည် လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာန အကြီးအကျယ်အရှုံးပြနေခြင်းကိုအခြေခံပြီး လွှတ်တော်ထံမှ ထောက်ပံ့ကြေး Subsidy ဘတ်ဂျတ်ငွေရအောင် Political Crisis တစ်ခုကို ပြည်သူထံချပြလိုက်ခြင်းလို့ ရိုးသားစွာရှုမြင်ပါသည်။ လွှတ်တော်နဲ့အစိုးရ ၂ခုအကြား (ဦးရွှေမန်းရဲ့လွှတ်တော်ဘတ်ဂျတ်နဲ့ဦးသိန်းစိန်ရဲ့လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာန) ငွေကြေးအခက်အခဲဖြေရှင်းနည်းပဲဖြစ်ပါသည်။ လွတ်တော်က ဘတ်ဂျက်ချမပေးလို့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလဲ အမေရိကန်အိုဘားများအစိုးရပုံစံ ခဏရပ်ပေးရလျှင်… Continue
Added by Zaw Aung on November 15, 2013 at 1:16am —
No Comments မန္တလေး ရွှေမြို့တော်သို့ တစ်ခေါက်
Arriving Ygn and welcome with paddy fields
၂ရက်တာ မန္တလေးခရီးစဉ်ကို မိတ်ဆွေ၃ဦးနဲ့မမျှော်လင့်ပဲ ရောက်ရှိသွားပါသည်။ Jetstar ရန်ကုန် လေယဉ်ဆင်းချိန် အောက်မှာစိမ်းလန်းစိုပြေတဲ့ လယ်ကွင်းများကိုတွေ့ရသည်။… Continue
Added by Zaw Aung on November 2, 2013 at 8:30pm —
No Comments ဒေါ်စုရဲ့ ဆင်းဟတ် တော်ဝင်စစ်တက္ကသိုလ် (အင်္ဂလန်) မိန့်ခွန်း ဘာသာပြန်လေးပါ
ဒေါ်စုရဲ့ ဆင်းဟတ် တော်ဝင်စစ်တက္ကသိုလ် မိန့်ခွန်း ( အင်္ဂလန် ) ဘာသာပြန်လေးပါ facebookမှာတွေ့လို့တဆင့်ကူးယူဖော်ပြလိုက်တာပါ...အတုယူစရာကောင်းတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေမှာရှိရမဲ့ အရည်းအချင်းတွေပါ... အင်္ဂလိပ်လို နားထောင်လိုပါက …
Added by Ko Nge on November 2, 2013 at 2:30pm —
No Comments မင်းဆက်ဝေ-အစွန်းရောက်သူမျာ;24
ဗုံးပေါ်က်ကွဲမူများကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ တော်၏ လုံခြုံရေးကိုနိူင်ငံတော်အဆင့် လုံခြုံရေး အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး ဆောင်ရွှတ်နေသည်။မကြာသေးခင်ကလည်း ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တောင်ငူမြို့ တွင် ဗုံးပေါ်က်ကွဲမူများဖြစ်ဟွးခဲ့ ပြီး ညောင်လေးပင်၊ဖြူးမြို့ နယ်တို့ တွင်လည်း လက်လုပ်ဗုံးနှင့်မိုင်းများဆက်တိုက်ဆိုသလိုတွေ့ ရှိခဲ့ ကြသည်။ထိုနောက်တွင်မူအောက် တိုဘာ(၁၄)ရက် ည(၁၁)နာရီခွဲခန့် အချိန် ရန်ကုန်မြို့ ၊ဆူးလေဘုရားလမ်းရှိ ၊TREADERဟိုတယ် ကိုးလွှာ အခန်းနံပါတ်၉၂၁၏ ရေ ချိုးခန်းအတွင်း ဗုံးပေါ်က်ကွဲမူထပ်မံဖြစ်ဟွးခဲ… Continue
Added by minsetwai on October 21, 2013 at 10:47pm —
No Comments Telenor Myanmar ဆက်သွယ်ရေး (နော်ဝေးကုမဏီ)သို့ အလုပ်ခန့်ရန်ဘန်ကောက်(ထိုင်း)မှ တာဝန်ယူထား
Executive Search Services (ESS) Co Ltd,ahuman resources management consulting firm based in Bangkok, Thailand, has been commissioned by Telenor Myanmar to handle the application process for Telenor’s Recruitment Project.
On behalf of Telenor Myanmar, we would like to inform you that we have received your application but due to huge number of… Continue
Added by Zarni Gyi on October 18, 2013 at 7:29am —
No Comments Save the Children, Maltesa, Solidarités International, World Vision, French Red Cross, Thingaha နှင့် US Embassy တို့မှအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ
No Comments ဆရာကြီး ဦးဂိုအင်ကာ ၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဓမ္မဂီရိ ၀ိပဿနာ အဖွဲ့သို့ ထောင်တွင်း တရားပတ်များကျင်းပနိုင်ရေး
ဆရာကြီး ဦးဂိုအင်ကာ ၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဓမ္မဂီရိ ၀ိပဿနာ အဖွဲ့သို့ ထောင်တွင်း တရားပတ်များကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် ... အလှုငွေ ကုသိုလ် ယူ လှုဒါန်းလိုသူများ ဆက်သွယ် လှုဒါန်း နိုင်သောနေရာ နှင့် ဖုန်းနံပါတ်များ ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ...ဓမ္မဇောတိ ၀ိပဿနာရိပ်သာ ၀င်္ကဘာရေလည်ကျောင်း ငါးထပ်ကြီးဘုရားလမ်း...
ဗဟန်းမြို့နယ် ရန်ကုန်မြို့ ... ဖုန်း ... ၅၄၉၂၉၀ ... ၅၄၆၆၆၀e- mail :… Continue
Added by Myanmar Roommate on November 7, 2012 at 2:26pm —
No Comments ၀ါရင့် သတင်းစာဆရာကြီး လူထုစိန်ဝင်း ကွယ်လွန်
၀ါရင့်သတင်းစာဆရာကြီး လူထုစိန်ဝင်း(အသက် ၇၁ နှစ်) သည် ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့၊ ည ၁၁ နာရီ၊ မိနစ် ၃၀ အချိန်က ရန်ကုန်မြို့ ရွှေဂုံတိုင် အထူးကုဆေးရုံ၌ နာတာရှည် အဆုတ်ရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ဆရာကြီး လူထုစိန်ဝင်းသည် ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီခန့်တွင် ရွှေဂုံတိုင် အထူးကုဆေးရုံကြီးသို့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် တက်ရောက် ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ပြီး ည ၁၁ နာရီ၊ မိနစ် ၃၀ အချိန်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ဆရာလူထုစိန်ဝင်းကို ၁၉၄၀ ပြည့်နှစ် သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင်… Continue
Added by Rachel Kyaw on June 18, 2012 at 5:27am —
No Comments ဆူနာမီသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း
ယနေ့ (၁၁-၄-၂၀၁၂)ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ (၃)နာရီ(၈)မီနစ်အချိန်က အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ မြောက်ဆူမတြာကျါန်းရဲ့ အနောက်တောင်ဖက် (၂၆၈)မိုင်အကွာ ပင်လယ်ပြင် အောက်ခံမြေပြင်ပေါ်တွင် အာအား ရစ်ခ်ျတာစကေး (၈.၇)ရှိ…
Added by Simon Kamta on April 11, 2012 at 6:56pm —
No Comments အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်သိန်းတန် ငွေစက္ကူ
စင်ကာပူမှာ ဒူဘိုင်းငွေစက္ကူ ဒေါ်လာတသိန်းတန် 100,000 dirham ကို ကိုင်ပြပြီး၊ ငွေလဲဖို့ ကြံရွယ်နေတဲ့ မြန်မာတယောက်အကြောင်းပါ။ ဟိုး .. ဒူဘိုင်း ဟိုတယ်ကြီးမှာ ၄နှစ်အလုပ်လုပ်စဉ် သူဌေးကြီးတယောက်ရဲ့ ကျန်ခဲ့တာ ရယူထားတယ်ပြောပါတယ်။ စင်ကာပူဒေါ်လာ သုံးသောင်းကျော် တန်ဆိုပဲ။ စင်ကာပူမှာ ငွေလဲလို့ရမလား သင့်ကို… Continue
Added by ၀တ်မှုန် on April 6, 2012 at 10:30pm —
ကျွန်တော်တို့တွေ online ကနေ မဲပေးရအောင်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ အခြေစိုက် ထုတ်ဝေတဲ့ တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ပြည်သူတွေကို လွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ၁၀၀ စာရင်းအတွက် ကြိုတင် ရွေးချယ်ထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ အမည်စာရင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးသိန်းစိန်တို့ အမည်ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်(အမေစု)အား မဲပေးရန်အတွက်… Continue
Added by thanzawmin on April 3, 2012 at 12:43am —
Thein Sein: the gentle general behind Suu Kyi’s triumph
by FP Staff Apr 2, 2012
Once deemedapuppet leader, President of Myanmar Thein Sein, can today perhaps take some credit for negotiating democratic leader Aung Sung Suu Kyi’s return to politics and ensuring thatafree poll allowed the National League for Democracy to romp to victory.
A graduate… Continue
Added by ၀တ်မှုန် on April 2, 2012 at 4:30pm —
No Comments အားလုံးကို ပျော်စေချင်တာ
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ အများပြည်သူတွေ မျှော်လင့်ထားကြတဲ့ အတိုင်း ရလာဒ်တွေလည်း ပေါ်ထွက်လာပါပြီ။
ဒီလို အစချီလိုက်ကတည်းက ဘာအကြောင်းပြောနေလဲဆိုတာ စဉ်းစားစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး။
အခုကျွန်တော်တို့ တိုင်းသူပြည်သားတွေ အရမ်းပျော်နေကြပါပြီ။ ပြည်ပရောက် ကျွန်တော်တို့တွေလည်း ကိုယ်တိုင်မဆင်နွဲရသော်ငြား ပျော်ရရွင်ရပါတယ်။ အမေကိုယ်တိုင်လည်း အရမ်းပျော်နေမှာပါ။
ခုဆိုရင် အားလုံးသိပြီးနေလောက်ပါပြီ။ အဲဒီ သိနေတာကိုပဲ အရသာခံပြီး ပြောချင်သလို ဖြစ်နေပါတယ်။
ဘာရယ်ကြောင့်မှ မဟုတ်ပါဘူး။… Continue
Added by Khunlay on April 2, 2012 at 1:27am —
2013 ကမ္ဘာ့အဂတိလိုက်စားမှု အဆိုးဆုံးနိုင်ငံစာရင်းမှ မြန်မာလွတ်မြောက်စပြု
အဂတိ လိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေ ၂၀၁၃ - ပညာရှင်များသုံးသပ်ချက်
စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေး ဆောင်းပါများ အတွဲ၅၀၀
ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို ဖျက်ဆီးနေတဲ့ No.1 သင်တန်းအကြောင်း
G-talk သုံးရင်း ရေနစ်ခဲ့သူတစ်ဦးအကြောင်း
Good News for our Hard Money
Australia scholarship information for Burmese citizen
မြန်မာပြည်တွင်းရှိ ငွေကြေးလဲလှယ်မှု နှုန်းထားများကို Online မှ အခမဲ့ အလိုအလျောက် ပြန်လည်ဖြေကြားပေးသည့်စနစ်
2016July (3)June (2)May (1)April (3)March (2)February (7)January (10)2015December (4)November (4)October (10)September (1)August (2)July (25)June (24)May (14)April (25)March (116)February (219)January (251)2014December (254)November (190)October (1549)September (2788)August (18)July (37)June (26)May (35)April (20)March (31)February (30)January (30)2013December (39)November (45)October (39)September (33)August (22)July (104)June (38)May (61)April (36)March (106)February (139)January (111)2012December (160)November (74)October (54)September (66)August (38)July (89)June (299)May (475)April (289)March (168)February (194)January (104)2011December (116)November (114)October (95)September (79)August (83)July (71)June (108)May (72)April (120)March (86)February (120)January (117)2010December (92)November (140)October (231)September (227)August (243)July (106)June (122)May (42)April (46)March (115)February (106)January (96)2009December (31)November (59)October (127)September (81)August (41)July (39)June (36)May (24)April (23)March (2)February (3)January (1)2008November (8)October (3)September (2)1999November (89) Welcome toMyanmar in Singapore